प्रचण्डलाई बिरामी बनाउने ‘फुच्चे’ कामरेडको नयाँ फन्डा
बाबुरामको बहिर्गमनपछि आनन्दले आफ्नो मनमौजी पार्टी चलाउने सोचमा रहेका प्रचण्ड फेरि एकपटक समस्यामा परेका छन् । एमाओवादीभित्र वैचारिक संघर्षको कुनै अर्थ छैन भनेर आत्मसमर्पण गर्ने तयारीमा रहेका राम कार्कीलगायत पूर्वबाबुराम गुटका ...
सञ्चारमन्त्रीलाई पत्नी खोज्ने अभियानमा सांसद साथीहरु असफल
‘मन्त्रीका लागि बिहे गर्न केटी चाहियो !’ यत्ति ६ वटा शब्द बोले पुग्छ, केटी दिनेको लस्कर टुँडिखेलले धान्दैन । तर, नेपाल सरकारका बहालवाला मन्त्रीका लागि दुलही माग्न गएका मान्छेले दुलही त ...
लाजिम्पाटमा पोको झरेपछि गृह मन्त्रालयबाट सरुवा !
लाजिम्पाटमा यारिस गाडीमा दुई–चारवटा पोको झरेको र ती पोका समीर दाहालले रिसिभ गरेको केही दिनमै महानगरीय प्रहरी आयुक्तमा एआईजी प्रताप थापा सरुवा हुनुलाई संयोग मात्र मानिएको छैन । अहिले भेटैपिच्छे सशस्त्र प्रहरीका ...
को को बन्दैछन् राष्ट्रपतिका सल्लाहकार ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू निर्वाचित भएको डेढ महिनासम्म पनि सल्लाहकार नियुक्ति गरेकी छैनन् । यसबाट सल्लाहकारको दौडमा रहेका आकांक्षीहरूले लामो समयसम्म दौडधुप गरिहनुपरेको छ । स्रोतका अनुसार, देशका शासन चलाउने शीतल निवासका ...
जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नेलार्य १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। स्थानीय टोल सुधार समितिले घरेलु जाँड र रक्सी उत्पादन गर्नेलाई जरिवाना तोकेको हो। यस्तै मदिरा सेवन गर्नेलाई भने पाँच ...